Sababaha # 1 ee Shirkadaha Sababta ugu Fashilma Waxkaqabadista Mashiinka Raadinta | Martech Zone
Sababta # 1 Shirkadaha Sababta ayaa ugu Fashilma Is-hagaajinta Mashiinka Raadinta
Arbacada, December 10, 2014 Arbacada, December 10, 2014 Douglas Karr
Haddii ay jirto hal shay oo iga careysiiya markay tahay ayna search engine, waa marka qof gadaal ka riixo horumarka ama goobta isbeddelo sababtoo ah iyagu wax meel ka aqri. Haddii bartaadu nuugto qiimeynta oo aad awoodi kari weydo inaad hagaajiso darajooyinka, waa inaad wax ka beddesho. Adoo uga tagaya xaalada goobta hada maxaa yeelay adiga wax meel ka aqri wuxuu ku siinayaa natiijooyinka saxda ah ee aad hadda haysato… midna.
Sababta # 1 ee shirkaduhu ugu fashilmaan hagaajinta mashiinka raadinta waa sababta oo ah wax meel ka aqri cudurdaar waxqabad la'aan. Halkii laga isticmaali lahaa ilaha horumarinta iyo tijaabinta, qaar ka mid ah horumariyeyaasha ayaa fadhiya qol gadaal ah oo baaraya Google forums si uu u difaaco aragtidiisa ah inuusan aheyn inuu hagaajiyo goobta. Waa wax lagu qoslo.
Ficil, geeddi-socod, ama hannaan sameynta wax (sida naqshad, nidaam, ama go'aan) si buuxda u dhammaystiran, shaqeynaya, ama wax ku ool ah intii suurtagal ah; gaar ahaan: hababka xisaabta (sida helitaanka ugu badnaan hawl) ee ku lug leh tan. Qaamuuska 'Merriam-Webster Qaamuus
Mashiinnada raadintu ma laha sharciyo iyo liis hubineed si loo hubiyo in bartaadu si fiican u jirto. Kooxda ka socota Google waxay ku siisay waxyaabo aasaasi ah oo aad sameyn karto iyo sidoo kale aalado lagula socdo guushaada. Waxay kuu sheegi doonaan inaad hubiso in bartaadu ay tahay mid guurguurta, hubi inay dhakhso tahay, hubi inaadan xannibayn matoorada raadinta… waxayna ku siinayaan waxyaabo badan oo badan oo aad sameyn kartid si aad kor ugu qaaddo khibradda raadinta - khariidadaha maareynta, iskuxirka xarfaha, tusmooyinka meta , tags alt, HTML qaabdhismeedka, pinging, isticmaalka keyword, kala sareynta, iwm hi
Laakiin iyagu kuuma sheegayaan wax walba oo ay tahay inaad sameyso, waxay kugula talinayaan inaad hagaajiso bartaada. Marka, adiga ayey kugu saaran tahay inaad tijaabiso isticmaalka muuqaalka, isticmaalka fiidiyowga, qaab dhismeedka goobta, marin habaabinta, iwm.
fal - taasi waxay ka dhigan tahay inaad u baahan tahay inaad wax qabato!
imtixaanka - taasi waxay ka dhigan tahay inaad abuurtay hannaan ama habab aad ku tijaabiso isbeddelada.
Cabbiraad - taasi waxay ka dhigan tahay waa inaad cabirtaa natiijooyinka isbeddelada aad ku sameyneyso goobta si aad ugu sheegto waxa shaqeeya iyo kuwa aan shaqeynin.
Wax Meel Ka Akhriso
Waxaa jira dhowr dhibaato oo leh wax meel ka aqri cudurdaar waxqabad la'aan:
The waqtiga talobixinta la siiyay waxay noqon kartaa mid waqtigeedii laga soo dhaafay iyadoo la adeegsanayo istiraatiijiyado habeynta mashiinka raadinta hadda. Tusaale ahaan, waad aqrin kartaa maqaal weyn oo ku saabsan qoraaga… laakiin mar dambe ma taageerto Google.
The Ilo talada waxay noqon kartaa mid gebi ahaanba ka baxsan macnaha arrimaha aad ku dhex socoto. Waxaa laga yaabaa in talooyinka la siiyay goob ganacsi, ama degmo maxalli ah, ama goob adeegsiga taleefannada gacanta ee sarreeya leh… in talooyinkaas ay shaqeyn karaan ama aysan shaqeyn karin ama aysan mudnaan u lahayn bartaada.
Sidaa awgeed… waad hagaajineysaa. Iyo haddii aad la shaqeyneyso shirkad weyn oo haysa istiraatiijiyadda SEO, mas'uuliyadda ayaa jirta si loo hubiyo inaadan furin. Laakiin sidoo kale waxay leeyihiin khibrad sidaa darteed looma baahna inay kooxdaadu tagto wax meel ka aqri.
The wax meel ka aqri cudur daar waa inuu tagaa. Waxaad ka heli doontaa hal milyan oo sabab ah shabakadda waxqabad la'aan, laakiin markii waxa aad qabatay ay shaqeyn waayaan, ma filan kartid natiijooyin kala duwan illaa aad isbeddello ka sameyso. Taasi waa fure u ah hagaajinta - sii wad tijaabinta habab kala duwan si aad u ogaan karto waxa sida ugu fiican u shaqeeya. Ha iska tuurin wax mooyee, tusaale ahaan, Google waxay bixisay fariin cad oo ku saabsan waxa la sameeyo ama aan la sameyn. Tusaale ahaan, Google wuxuu kuu sheegay inaanad waligaa bixin isku xidhka. Marka ha sameynin.
Wax kasta oo kale waxay u furan yihiin wax hagaajin. Jooji inaad marmarsiiyo la timaadid oo bilow inaad hadda kafiiriso goobtaada!
Tags: Fal!Cabbiraadwax meel ka aqriayna search enginehabka raadintahabka ugu habboon ee raadintaSEOimtixaanka
Ma Jiro Buug Hype ah oo ku saabsan Abuurista Mawduucyada
5 Email Isbeddellada Mobilka Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ka Fiirsatid